विदेश जाँदै हुनु हुन्छ ? एकपटक पढ्नुहोस् - Tufan Media News
विदेश जाँदै हुनु हुन्छ ? एकपटक पढ्नुहोस्
३० कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:०२
काठमाडौं, ३० कात्तिक / नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले हङ्कङ उडानका लागि सरकारी प्रयोगशालाको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्टलाई मात्र मान्यता दिने भएको छ ।
निगमको महत्वपूर्ण गन्तब्य हङकङ उडानमा केही यात्रुमा बारम्बार कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि त्यहाँको नागरिक उड्डयनले उडान प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ ।
हङकङले पछिल्लो पटक निगमलाई तेस्रो पटक १४ दिनको लागि उडान प्रतिबन्ध गरेको छ । नेपालबाट पिसिआर गरेर गएका यात्रुको त्यहाँ पुनः परीक्षण गर्दा पोजेटिभ रिजल्ट आएका कारण निगमको उडान प्रतिबन्ध भएको निगमका प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
निगमका अन्य उडान गन्तब्यमा भने यस्तो समस्या नरहेको पनि उहाँले उल्लेख गनुभयो। आवश्यक अनुसन्धानको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालाईलाई आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलका अनुसार हङकङले अन्य मुलुकको उडान पनि प्रतिबन्ध गरेको अवस्थामा नेपाल एयरलाईन्सलाई तेश्रो पटक १४ दिनकोलागि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
“मुख्य कारण चांही पिसिआर गरेर गएका यात्रुहरुको त्यहाँ पुनः परिक्षण गर्दा पोजेटिभ रिजल्ट आउनु थियो । सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट रिपोर्टको आधारमा यात्रा गराउँदासमेत पुनःपोजेटिभ देखिनुले चिन्तित बनाएको छ,” महाप्रबन्धक पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गनुर्भभएको छ।
हङकङको नागरिक उड्डयनले एयर ईन्डियालाई चार पटक, भिस्तारा एयरलाई तेश्रो पटक, क्याथे ड्रागनलाई ९मलेशियाबाट० ईमिरेट्स ९दुबई० सिंगापुर एयरलाईन्स ९२० पटक लगायत अन्य केही एयरलाईन्सलाई एक–एक पटक गरि उडान प्रतिबन्ध लगाईरहेको पनि उनले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल एयरलाइन्सको पछिल्लो उडान प्रतिबन्ध २५ नोभेम्बरसम्म कायम रहनेछ । पछिल्लोपटक दुबई र नारिताले निगमको उडानमा एक÷दुई जना यात्रुमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको भन्दै निगमलाई सचेत पत्र पठाएको थियो ।
निगमले उडान गर्ने गन्तब्यमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट पिसीआर परीक्षण गरी ७२ घण्टा भित्रको रिपोर्टलाई मान्यता दिने गरेको छ ।
निगमले अन्तर्राष्ट्रियतर्फ दुई थान वाईड बडी ए ३३० र दुई थान न्यारोबडी ए ३२० जहाजले भारतका तीनसहित विभिन्न मुलुकका नौ गन्तब्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको छ ।
क्षमताभन्दा बढी काम गराइएकाले
इराकमा एक नेपाली महिलाको
कतारले अब नयाँ श्रमिक
कुवेतमा सुतेकै अवस्थामा एक
मलेसियामा आरती मगरको ह’त्या